Home Wararka Warar iskhilaafsan oo ka soo baxaya qaraxii maanta ka dhacay Muqdisho
Warar iskhilaafsan oo ka soo baxaya qaraxii maanta ka dhacay Muqdisho
Waxa jira Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax Miino oo Saakay ka dhacay xafadda Taleex degmada Hodo nee gobolka Banaadir gaar ahaanna Madaxtooyadii hore ee C/qaasim Salaax Xasaan. Qaraxa oo ahaa Miino wadada dhinaceeda la dhigay waxaa lagu bar-tilmaameedsaday Gaariga taliyaha ciidanka Asluubta Somaaliyeed,Mahad C/raxmaan Aadan.
Sida ay sheegeen goobjoogayaal, inta la xaqiijiyay Laba Askari oo ka mid ah ilalada Taliyaha ciidanka Asluubta ayaa ku dhigtay qaraxa waxaana ku dhaawacmay Laba qof oo shacab ah oo midi tahay Dumar. Alshabaab oo war ka soo saaray qaraxaas waxa ay sheegeen in uu si dirqi ah uga badbaaday Taiyaha ciidanka Asluubta,islamarkaana ay ku dileen Laba Askari oo ka mid ah Ilaaladiisa halka kuwa kalana ay ku dhaawaceen.
Dhanka kale Al Shabaab ayaa sheegay in uu ka mid ahaa saraakiisha ciidamada dowladda ee ka soo qeyb qatay dagaalo culus oo ka dhacay gobolak Bakool,islamarkaana ay ku daba jireen. Maamulka degmada Hodon ayaa u sheegay Warbaahinta in Afar Askari ay ku dhinteen qaraxa islamarkaana qof Shacab ah uu dhaawac ka soo gaaray welina ay wadaan baaritan.